Fraport Group: Nisondrotra be ny vola miditra sy ny tombombarotra azo tao anatin'ny sivy volana tamin'ny taona 2021
Home » Lahatsoratra farany farany » Airport » Fraport Group: Nisondrotra be ny vola miditra sy ny tombombarotra azo tao anatin'ny sivy volana tamin'ny taona 2021
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao Mafana Alemana • Vaovao • People • fanorenana • tompon'andraikitra • News sustainability • teknolojia • Tourism • Fitaterana • Travel Wire News
Fraport Group: Nitombo be ny vola miditra sy ny tombom-barotra azo tao anatin'ny sivy volana tamin'ny taona 2021.
Nohamafisin'ny fanarenana miharihary amin'ny fitsangatsanganana fialan-tsasatra mandritra ny vanim-potoanan'ny fahavaratra, nitombo ny fidiram-bola tamin'ny ampahefatry ny fahatelo tamin'ny 2021 tamin'ny 79.5 isan-jato ka hatramin'ny € 633.8 tapitrisa raha oharina amin'ny € 353.1 tapitrisa tamin'ny ampahefatry ny taona 2020.
Ny fanarenana ny fifamoivoizana amin'ny zotram-piaramanidina dia mitarika fitomboan'ny fidiram-bola matanjaka ao anatin'ny 9 volana voalohany amin'ny 2021.
Nahery vaika ny fitakiana fitsangatsanganana mandritra ny fahavaratra.
Nihatsara ny vokatra noho ny fanonerana ara-bola azo tamin'ny fatiantoka vokatry ny areti-mifindra tany amin'ny seranam-piaramanidina samihafa.
Ny orinasan'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Fraport dia nahazo fisondrotana lehibe amin'ny fidiram-bolan'ny Vondrona (tombom-bola madiodio) nandritra ny telovolana fahatelo sy ny sivy volana voalohany (nifarana ny 30 septambra) tamin'ny taom-piasana 2021. Anisan'ny antony nahatonga an'io fitomboana io ny fampandehanana tsara sy ny vokatra tokana. Manantena ihany koa ny vinavina amin'ny vanim-potoana ririnina ho avy. Noho izany, Fraport dia nanavao ny fomba fijery feno taona ho an'ny fidiram-bola sy ny tarehimarika ara-bola lehibe hafa miakatra kely. Ny fivoaran'ny fifamoivoizana ao amin'ny seranam-piaramanidina Frankfurt dia vinavinaina ho tonga any amin'ny faritra ambony amin'ny salan'isa andrasana, eo anelanelan'ny mpandeha 20 tapitrisa ka hatramin'ny 25 tapitrisa.
Fraport Ny tale jeneralin'ny Dr. Stefan Schulte, dia nanazava hoe: “Taorian'ny fatiantoka goavana nihatra tamin'ny taona 2020 sy ny fiakaran'ny trosa be dia be, dia mahita fanantenana mamiratra kokoa isika izao. Nahery vaika ny fitakiana fitsangatsanganana mandritra ny fahavaratra. Ankoatr'izay, nihatsara ny vokatray noho ny fanonerana ara-bola azo tamin'ny fatiantoka vokatry ny areti-mifindra tamin'ny seranam-piaramanidina samihafa. Ankehitriny, manantena ihany koa izahay fa hiverina tsikelikely ny fifamoivoizana intercontinental - tohanan'ny fanokafana ny sisintany amerikana vao haingana. Noho izany, somary be fanantenana kokoa momba ny vanim-potoana ririnina isika noho ny tamin'ny volana vitsivitsy lasa izay. Na izany aza, mbola lavitra be izany mandra-pahatongantsika indray ny haavon'ny mpandeha alohan'ny areti-mifindra ary afaka mampihena be ny trosantsika. ”
Telovolana fahatelo: mitombo be ny vola miditra sy ny tombom-barotra
Nohamafisin'ny fanarenana miharihary amin'ny fitsangatsanganana fialan-tsasatra mandritra ny vanim-potoanan'ny fahavaratra, ny fidiram-bola dia niakatra 2021 isan-jato tamin'ny telovolana fahatelo tamin'ny 79.5 ka hatramin'ny € 633.8 tapitrisa raha oharina amin'ny € 353.1 tapitrisa tamin'ny telovolana mitovy amin'ny taona 2020 (ireo sanda roa ireo dia namboarina ho an'ny fifanarahana mifandraika amin'ny IFRIC 12. fidiram-bola avy amin'ny fepetra fanorenana sy fanitarana amin'ny Fraportny sampana maneran-tany). Ny EBITDA dia niakatra ho 288.6 tapitrisa euros tamin'ny telovolana fahatelo, niakatra avy amin'ny minus 250.3 tapitrisa euros tamin'ny Q3/2020. Na izany aza, io tombony io dia taratry ny fiantraikany tokana ihany koa: Tamin'ny telovolana fahatelo tamin'ny 2020, ny vola miditra dia nisy fiantraikany ratsy tamin'ny famoronana fepetra momba ny fampihenana ny mpiasa mitentina 279.5 tapitrisa euros. Tamin'ity taona ity, ho setrin'izany, ny fandraisana anjara tsara tamin'ny telovolana fahatelo dia avy amin'ny fanonerana mifandraika amin'ny COVID ho an'ireo orinasanay any Etazonia, Slovenia ary Gresy - izay nampisondrotra ny "Hatram-bola hafa" an'ny Vondrona amin'ny € 30 tapitrisa. Mifanitsy amin'ireo vokatra tokana ireo, Fraport mbola nandefa fitomboana EBITDA matanjaka 785.6 isan-jato ka hatramin'ny € 258.6 tapitrisa tamin'ny ampahefatry ny taona 2021, mifanohitra amin'ny € 29.2 tapitrisa tamin'ny vanim-potoana mitovy tamin'ny taon-dasa. Ny vokatry ny Vondrona - na ny tombom-barotra - dia nitombo hatramin'ny €102.6 tapitrisa tamin'ny Q3/2021 (anisan'izany ireo vokatra tokana voalaza etsy ambony), raha oharina amin'ny minus €305.8 tapitrisa tamin'ny Q3/2020.
Sivy volana voalohany amin'ny 2021: Fraport dia nahazo vokatra miasa mafy, tohanan'ny vokatra tokana
Nandritra ny sivy volana voalohany tamin'ny taona ankehitriny, ny fidiram-bolan'ny Vondrona dia niakatra 18.3 isan-jato isan-taona ka efa ho 1.4 lavitrisa euros (ankoatra ny fiantraikan'ny IFRIC 12). Miaraka amin'ny fitomboan'ny mpandeha ivelan'i Frankfurt, ny fidiram-bola dia nisy fiantraikany tsara tamin'ny fifanarahana natao tamin'ny telovolana voalohany tamin'ny 2021 teo amin'ny Fraport sy ny Polisy Federaly Alemana (Bundespolizei) ho karama amin'ny serivisy fiarovana sidina nomen'ny Fraport teo aloha. Nahazo fidiram-bola fanampiny €57.8 tapitrisa ny fifanarahana. Nisy fiantraikany tsara teo amin'ny lafiny fidiram-bola ihany koa ny voka-dratsiny hafa: Anisan'izany ny tambin-karama avy amin'ny governemanta alemà sy ny fanjakan'i Hesse nomena an'i Fraport noho ny fitazonana ny fahavononan'ny seranam-piaramanidina Frankfurt mandritra ny fanakatonana, ary koa ny fanonerana ny valan'aretina ho an'ny sampan'ny Vondrona any Gresy. ny US ary Slovenia – izay nitondra vola mitentina 275.1 tapitrisa euros ho an'ny “Other Income” an'i Fraport. Miaraka amin'ny fandoavana karama avy amin'ny Polisy Federaly Alemana, ireo vokatra tsy miverimberina ireo dia nitondra vola mitentina 332.9 tapitrisa euros ho an'ny fidiram-bola hafa, miaraka amin'ny fiantraikany tsara mifanaraka amin'ny vokatra miasa (EBITDA).
November 10, 2021 amin'ny 08: 37
Tao amin'ny orinasanay Bioenergy & Other dia nahazo fidiram-bola ambony kokoa raha oharina tamin'ny vanim-potoana mitovy. Tena nahafinaritra ahy ny namaky ity lahatsoratra ity mba hikaroka manoratra ity lahatsoratra tena tsara ity sy lahatsoratra mahasoa misaotra amin'ny fizarana.